Ururka qaran ee dhaqatiirta dalka oo ku hanjabay shaqa joojin – The Voice of Northeastern Kenya
Ururka qaran ee dhaqatiirta dalka oo ku hanjabay shaqa joojin
Star FM September 19, 2018
Ururka qaran ee ay ku mideysanyihiin dhaqatiirta dalka ee magaciisu loo soo gaabiyo (KMPDU) ayaa ku goodiyay in xubnaha ka tirsan ay shaqa joojin ku dhaqaqayaan hadii aanan dib loo soo celin howlwadeena caafimaad oo ka howlgalayay isbitaalka Pumwani ee magaaladatani Nairobi.
Arrintan ayaa timid kadib markii barasaabka caasimadda dalka Mr. Mike Sonko uu si ku meel gaar ah shaqada uga istaajiyay sarakiisha sar sare ee xarunta caafimaad ee ay hooyooyinka ku umulaan ee Pumwani.
Tallabada uu Mike Sonko qaaday ayaa ka dambeysay kadib markii meydadka 12 carruur ah laga helay halkaasi taasi oo guddoomiyaha uu sheegay inay mas’uuliyad darro ku timid.
Guddoomiyaha ururka qaran ee dhaqatiirta ee KMPDU, Mr. Samuel Oroko ayaa cambareeyay tallabada uu Mike Sonko shaqada uga istaajiyay dhaqatiirta.
Waxaa uu ku tilmaamay go’aan siyaasadeysan sidaasi awgeedna ay dalbanayaan in shuruud la’aan sida ugu dhaqsiyaha badan howlwadeenada ay tallabadaasi saameysay loo ogolaado inay shaqadooda sii wataan.
Mr. Oroko ayaa sheegay in isbitaalka dhalmada ee Pumwani uusan lahayn goobta meydadka la dhigo taasina ay tahay mas’uuliyadda dowlada ismaamulka Nairobi.
Dhanka kale guddiga caafimaadka ee aqalka sare ee dalka ayaa casumaad u fidiyay wasiiradda wasaaradda caafimaadka Mrs. Sicily Kariuki si ay uga soo hormuuqato maalinka khamiista ah.
Waxaa haweeneydan looga fadhiyaa inay faahfaahin dhameystiran ka bixiso xaaladda isbitaalada waweyn ee dowliga ah.
Guddoomiyaha guddigan , Michael Mbito ayaa meydadka dhallaanka ee laga helay isbitaalka Pumwani ku tilmaamay nasiib darro wuxuuna shacabka Kenyaanka ah u xaqiijiyay inay arrinkaasi baaritaano ku sameynayaan si looga sal gaaro.
Guddoomiye ku xigeenka guddiga caafimaadka ee Senetka Ibrahim Cali ayaa dhankiisa barasaabka Nairobi , Mike Sonko uga digay inuu arrinka u bedelo siyaasad wuxuuna ku booriyay inuu xoogga saaro wanaajinta adeegyada caafimaadka ee dadweynaha loo fidiyo.
Agaasimaha waaxda dembi baarista ee dalka Mr. George Kinoti ayaa isna la filaya inuu 7 maalmood kadib warbixin soo saaro kadib markii agaasimaha waaxda dacwad soo oogidda Mr. Nuurdiin Xaaji uu amray in la sameeyo baaritaano wax ku ool ah.
← Xildhibaankii hore ee degaanka Lugari oo maxkamad la soo taagayo
Abaanduulaha booliska oo sheegay inuu sii jirayo dareeska cusub ee sarakiisha →